Baandii muuziqaa Jaanoo Eertiraatti akka hin sirbine taasifamee turee? - BBC News Afaan Oromoo
Baandii muuziqaa Jaanoo Eertiraatti akka hin sirbine taasifamee turee?
Madda suuraa, Jano band offical/Instagram
Hojii muuziqaa dhiheessuuf gara Eertiraatti torbee darbe kan imale baandiin Jaanoo waltajjiirratti osoo dhiheessaa jiru adda akka kutu taasifamuu isaa miidiyaalee hawaasummaa adda addaa ibsuun isaanii dhagahameera.
Baandii kun hojiisaa addaan akka kutuuf kan godhame osoo waltajjiirratti hojiisaa 'Yinagaal' jedhu dhiheessaa jiruu yoo ta'u; kunis kan ta'e waltajjii muuziqaa magaalaa Massawwaatti taasifamerratti akka ta'e dhagahameera.
Miseensa baandichaa kan ta'e Saamu'eel Asaffaa "kun oduu dhugaarraa fagaatedha" jechun BBC'tti himeera.
Waltajjii muuziqaa magaalaa Massawwaatti taasifameen wellistoonni hedduu hojiilee muuziqaasaanii dhiheessuu kan dubbatu Saaamu'eel; wellistoonni isaanii dura hojiilee muuziqaasaanii dhiheessan sa'aatii dheeraa fudhachuun waltajjii itti fayyadamuus dubbata.
Jilli mootummaa Eertiraa har'a Finfinnee gala
Ministirri haajaa alaa Eertiraa dowwannaa hojiif Finfinnee galu
Baandichi yeroo gara waltajjiitti bahu sa'aatiin qaban gabaabaa waan ta'eef hojiilee waltajjicharratti dhiheessuuf qabatan 19 keessaa 13 dhiheessuusaanii BBC'tti himeera.
"Sirba 'Yinagaal' jedhu dhiheessinee sirba 'Daarign' jedhu akkuma jalqabneen akka addaan kunnu nutti himame. Sababni isaas naannoo ture sanitti eega halkanaa'ee booda sagalee ol kaasanii jeequun akka hin danda'amne nutti himameera," jedha.
Saamu'eel dabalataanis bakkeewwan hojiilee muuziqaasaanii dhiheessanitti hawaasani haala gaarii ta'een akka isaan simate yaadachuun simannaa hawaasaafi hojiileesaanitti gammadoo akka ta'an ibseera.
Madda suuraa, Yemane G. Meskel/Twitter
Gareen muuziqaa Itoophiyaa hojiilee isaanii agarsiisuuf gara Eertiraa kan imalan torbee darbe yoo ta'u, miseensota 60 ol qabatee ture.
Gareen kun magaalota Ertiraa sadii keessatti agarsiisa jedhamee eeggamus magaalota Asmaraafi Massawwaa qofatti kan dhiheessan.
Gareen kun Ministira Haajaa Alaarraa, Ministira Aadaafi Turiizimiirraa, Tiyaatira Biyyaalessarraa, Weellistoota beekkamoofi baandii Jaanoorraa ture namoonni kan walitti bahan.
Komishiinarri Ispoortiifi Aadaa Eertiraa Ambaasaaddar Zamadee Takilee miidiyaa biyyattiif akka himanitti: "Agarsiifni aadaafi hojiilee aartii biyyoota lamaan jiddutti taasifamu walitti dhufeenyaa biyyoota lamaanii cimsuufi muxannoo wal jijjiiruu gargaara," jedhaniiru.
Deetaan Ministira Aadaafi Turiizimii Itoophiyaa Aadde Buzuunesh Masarat gama isaaniitiin, daawwannaan kun kan kanaan dura garee Aadaa Eertiraan jalqabamee ta'ee kutaa itti aanudha.
"Walitti dhufeenyi dippiloomaasii biyyoota lameen jiddu jiru kana caalaa guddachuufi itti fuufinsa qabaachuu qaba," jedhaniiru.
Gareen kun agarsiisa isaa xumuruun har'a gara Itoophiyaatti ni deebi'a jedhamee eeggama.
Asiin dura gareenAadaa Eertiraa gara Itoophiyaa deemuun magaalota akka Baahirdaar, Adaamaa, Hawaasaafi Finfinneetti hojiilee muuziqaa dhiheessuun isaanii ni yaadatama.
Eertiraa: Ministirri haajaa alaa Eertiraa dowwannaa hojiif Finfinnee galu
'Oromo Graphya' fi seenaa Oromoo akka Arabootni barreessanitti
Yeroo dhuma kan haaromfame: 7 Hagayya 2019
Finfinneen hojjattooota biyya alaaf magaala jireenyaaf rakasaa ta’an keessaa tokko jedhamte